पुरानो मेडिकल कलेजमा फेरी शुरु भयो मिर्गौला प्रत्यारोपण - Seto Khabarपुरानो मेडिकल कलेजमा फेरी शुरु भयो मिर्गौला प्रत्यारोपण - Seto Khabar
२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:३४
काठमाडौँ, २९ जेठ । चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पुरानो मेडिकल कलेज) टिचिङ अस्पतालमा लामो समय पछि मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ । करीब चार बर्ष अघि नै लाइसेन्स पाएको कलेजले त्यति नै समयको अन्तरालमा तेस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको हो ।
गत सोमबार प्राडा राकेश बर्माको टोलीको साढे तीन घण्टा लगाएर भक्तपुर -६ निवासी ५४ बर्षीय विष्णुगोपाल बतासको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको हो । उनलाई २५ बर्षीय आफ्ना भान्जा रिजनबीर जोशीले मिर्गौला दिएका हुन् ।
‘७२ घण्टा भयो, प्रत्यारोपण भएका बतासको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख छ । हामी खुशी छौँ,’ डा बर्माले भने । उनले अब दोस्रो केश पनि छिटै गर्ने बताए ।
प्रत्यारोपणका लागि आफ्नो नेतृत्वमा डा प्रविण जोशी , डा सुदीपराज केसी, डा भुषण तिमल्सेना, डा माधव घिमिरे, डा वीरेन्द्र यादव लगायतको टोली खटिएको डा बर्माले बताए ।
प्रत्यारोपण केन्द्रका डा. बर्मा अब भरतपुरमा ?
सोमबारको प्रत्यारोपण पछि उत्साहित भएका डा. बर्माले पुरानो मेडिकल कलेजमा मिर्गौला प्रत्यारोपणले नियमितता पाउने दावी गरे । उनले आफूले अब पुरानो मेडिकल कलेजबाट सेवामा निरन्तरता दिने बताए । ‘मैले अब यता नै निरन्तरता दिन्छु । म यता आवद्ध भएर नै यो सेवा सुरु भएको हो,’ डा बर्माले भने ।
हाम्रो टोली देशभर फिजिदैछ : डा पुकार चन्द्र श्रेष्ठ
उनले प्रत्यारोपण केन्द्र अहिले एकेडेमी जस्तो भएको समेत बताए । ‘हामीसंग सिकेका धेरैले अन्यत्र गएर सेवा दिनु भएको छ । त्यसैले यो एकेडेमी जस्तो भएको छ,’ उनले भने ।